मोटीहरुलाई यस्तो अवसर ! – Akhabar Today
मोटीहरुलाई यस्तो अवसर !
काठमाडौं, २२ मंसिर । अधिकांश युवतीहरु शरीरको मोटोपना बढ्दा चिन्तित हुन्छन् । तर, यही मोटोपनाले कहिलेकाहीँ अवसरको ढोका खोलिदिन्छ । यस्तै एउटा एउटा अवसर हो, ‘सुपर प्लस साइज मोडल नेपाल ।’